Amaqiniso Ngomongameli wase-US uJames K. Polk
UJames K. Polk (1795-1849) wakhonza njengomongameli weshumi elinanye. U-He.is uthathwa ngabaninzi ukuba abe ngumongameli wexesha elihle kwi-American History. Wayengumkhokeli onamandla ngexesha leMfazwe yaseMexico . Wongeza indawo enkulu eUnited States esuka kwi-Oregon Territory ngeNevada naseCalifornia. Ukongezelela, wagcina zonke izithembiso zakhe. Ezi zinto zibalulekileyo zilandelayo ziyakunceda ufumane ukuqonda okukhulu kweshumi elinanye umongameli wase-United States.
Uqalise iMfundo eqhelekileyo kwi-18
UMongameli James K. Polk. MPI / Stringer / Getty Izithombe
UJames K. Polk wayengumntwana ogulayo ovalelwa yi-gallstones de wayeneminyaka elishumi elinesixhenxe. Ngelo xesha, wawacima ukuba aphethwe ngaphandle kwe-anesthesia okanye inzalo. Xa wayeseneminyaka elishumi, wathuthela kunye neentsapho zakhe eTennessee. Waqala kuphela imfundo yakhe esemthethweni emva kokuba neshumi elinesibhozo ngo-1813. Ngo-1816, wamkelwa kwiYunivesithi yaseNorth Carolina . Waphumelela apho kwiminyaka emibini kamva kunye nodumo.
Umfundisi wokuqala oTitshala
USara Childress Polk, Umfazi kaMongameli uJames K. Polk. MPI / Stringer / Getty Izithombe
UPolk watshata noSarah Childress owayefundiswe kakuhle kakhulu ngexesha. Waya kwi-Salem Women Academy eNyakatho Carolina. Ipolk yathembela kuyo yonke impilo yakhe yezopolitiko ukuze imncede abhale iintetho kunye neencwadi. Wayengummeli wokuqala, ohloniphekileyo, ohloniphekileyo, ochaphazelekayo .
Andrew Jackson, uMongameli we-Seventy we-United States. I-Hulton Archive / Stringer / Getty Izithombe
Ngomnyaka we-1825, uPolk wancama isihlalo kwiNdlu yabameli be-US apho wayeza kubakho iminyaka elishumi elinesine. Uthole igama lomnxeba elithi 'Young Hickory' ngenxa yokuxhasa kwakhe uAndrew Jackson , 'Old Hickory'. Xa uJackson ephumelele uongameli ngowe-1828, inkwenkwezi yePolk yayinyuka, kwaye waba namandla kakhulu kwiCongress. Wanyulwe njengoSomlomo weNdlu ukususela ngo-1835-1839, kuphela ekushiya iNkongolo ukuba ibe ngumbusi waseTennessee.
Umviwa weNtsundu yamaHhashi
UMongameli Van Buren. Getty Images
I-polk yayingalindelekanga ukuba isebenzele umongameli ngo-1844. UMartin Van Buren wayefuna ukutyunjwa kwikota yesibini njengomongameli, kodwa isimo sakhe ngokuchasene neTexas sasingathandwa yiDemocratic Party. Iindwendwe zagqithisa ezithandathu izivoti ngaphambi kokuba zidibanise kwiPolk njengoko zikhetha umongameli.
Kukhetho oluqhelekileyo, uPolk wagijima ngokumelene no-Whig umcebisi uHenry Clay owayechasene nesihlomelo saseTexas. Bobabini iClay kunye nePolk bagcina befumana ama-50% evoti ethandwayo. Nangona kunjalo, i-polk yakwazi ukufumana i-170 kuma-275 ngamavoti okhetho.
Mongameli uJohn Tyler. Getty Images
Unyulo lwe-1844 lujolise kulo mbandela we-annexation yaseTexas. UMongameli uJohn Tyler wayengummeli onamandla wokuhlomelo. Ukuxhaswa kwakhe kunye nokuthandwa kukaPolk kwakuthetha ukuba isilungiso sesantluku sidlulileyo iintsuku ezintathu ngaphambi kokuba i-ofisi yeofisi kaTyler iphele.
54 ° 40 'okanye iMfazwe
Enye yeeplankthi zeprojekthi yePolk kwakuyikuphelisa imingxabano yomda kwintsimi yaseOregon phakathi kwe-US ne-Great Britain. Abaxhasi bakhe bathatha isandi sokumemeza "amashumi amahlanu anamane mane okanye alwa" ebenokunika i-US yonke i-Oregon Territory. Nangona kunjalo, xa uPolk eba ngumongameli waxoxisana neBrithani ukuba abeke umda kwi-49 ehambisanayo eyanika iMelika indawo eza kuba yiOregon, i-Idaho neWashington.
Ixesha elibonakalisiweyo liye lahlanganiswa nguJohn O'Sullivan ngowe-1845. Kwisigqibo sakhe sokuxhaswa kweTexas wabiza ngokuthi, "[T] ukuzaliseka kwendawo yethu yokubonakalisa ukusabalalisa izwekazi elinikezwe nguMbonelelo ...." Kwamanye ngamazwi, wayesithi iMelika inelungelo elinikelwe nguThixo lokusuka 'elwandle liye elwandle elikhanyayo'. Ipolk yayinguMongameli kule ndawo ephakamileyo yale furor kwaye yanceda ekwandiseni iMelika kunye zombini ingxoxo yakhe kumda we-Oregon Territory kunye neSivumelwano saseGuadalupe-Hidalgo.
Imfazwe kaMnu Polk
Ngo-Epreli ngo-1846 xa amaMexico awela iRio Grande aze abulala amashumi elineshumi elinanye ase-US. Oku kwafika njengenxalenye yokuvukela umongameli waseMexico owayengumngcipheko weMelika ukuthenga i-California. Amajoni athukuthele malunga namazwe aziva ukuba athathwe ngokuxhaswa kweTexas, kwaye iRio Grande yayingumngcipheko wezomda. Ngo-Meyi 13, i-US yamemezele ngokusemthethweni imfazwe eMexico. Abagxeki bemfazwe kuthiwa nguMnu. IMfazwe yePolk '. Imfazwe yaphela ngasekupheleni kwe-1847 kunye neMexico ifuna uxolo.
ISivumelwano saseGuadalupe Hidalgo esiphelile iMfazwe yaseMexico yasimisela umda phakathi kweTexas neMexico eRio Grande. Ukongeza, i-US yakwazi ukufumana i-California ne-Nevada. Le yenyuka enkulu kwihlabathi lase-US ukususela ngo-Thomas Jefferson uthetha i- Louisiana Purchase . I-America yavuma ukuhlawula i-Mexico eyi-15 yezigidi kwiimimandla eyayifumana.
UPolk wafa eneminyaka engama-53, kuphela emva kweenyanga ezintathu emva kokuthatha umhlala-phantsi kwi-ofisi. Wayenanqwenela ukugijima ukuze aphinde abuyele kwaye wayegqibile ukuhlala phantsi. Ukufa kwakhe mhlawumbi ngenxa yekolera.
Yintoni Uya Kukunika Ikholeji Yethu?
I-Rugby Key Gear Protection
Indlela Yokusinda I-Avalanche
Abantu Abathinta Umbane: Iindaba ezimbi